Odinga oo taageerayaashiisa ugu baaqay inay qaadacaan doorashada - BBC News Somali
Odinga oo taageerayaashiisa ugu baaqay inay qaadacaan doorashada
Image caption Odinga ayaa taageerayaashiisa maanta kula hadlay Nairobi
Hogaamiyaha mucaaradka Kenya, Raila Odinga ayaa taageerayaashiisa ka dalbaday inaysan ka qeyb qaadanin doorashada madaxweyne ee ku celiska ah.
Mr Odinga ayaa ka haray tartanka doorashada isagoo sheegay inuusan ku qanacsanayn qaabka uu doorashadaasi uu u qabanayo guddiga doorashooyinka.
Maxkamad ayaa laashay natiijada doorashadii dhacday bsihii Agoost oo uu ku guuleystay Uhuru Kenyatta.
Guddoomiyaha guddiga doorashada Kenya ayaa mar sii horreysay sheegay in doorashada ku celiska ah ee Khamiista ay qabsoomi doonto sida uu markii horaba qorshuhu ahaa ka dib markii garsoorayaal ku filan ay soo xaadiri waayeen fadhi gaar ah oo ay maxkamadda ugu sarreysa dalka ka yeelan lahayd arrintan.
Guddoomiyaha maxkamadda ugu sarreysa Kenya, David Maraga, ayaa sheegay in maxkamaddu aysan go'aan ka gaari karin dacwad la doonayay in dib loogu dhigo doorashada ku celiska ahi iyo in kale.
David Maraga ayaa sheegay in garsooreyaasha maxkamadda oo toddobo ahaa aysan u suurtagelin dhammaantood in ay soo xaadiraan maxkamadda.
Ku xigeenkiisa ayaa maqnayd kaddib markii talaadadii shalay ahayd toogasho lagu dhaawacay mid ka mid ah ilaaladeeda.
Booliska iyo taageerayaasha Odinga ee Kisumu oo isku dhacay
Sida uu qabo sharciga, ugu yaraan shan garsoore ayay tahay in ay maxkamadda soo xaadiraan si ay u dhageysto dacwad ama ay go'aan u gaarto balse Maraga ayaa sheegay in gabadha ku xigeenkiisa ahi Philomena Mwilu aysan u suurtagelin in ay maxkamadda timaaddo..
Garsoore kale ayuu Maraga sheegay in uu soo xaadiri waayay maxkamadda maadaama sababo caafimaad awgood uu dalka uga maqan yahay.
Labo garsoore oo kale ayaysan iyaguna u suurtagelin in ay ka soo qeybgalaan dhageysiga dacwadda mana uusan caddeyn sababta halka mid kale oo joogay meel ka baxsan caasimadda Nairobi ay u suurtageli weyday in ay hesho duulimaad ay ku timaaddo Nairobi.
Guddoomiyaha maxkamadda ayaa raalligelin u jeediyay dhammaan axsaabta ay arrintani khuseysay.
Qolyaha u dooda xuquuqda aadanaha oo kiiskan geeyay maxkamadda ayaa sheegay in aysan Kenya diyaar u ahayn doorasho waxayna rajeynayeen in maxkamaddu ay joojiso doorashadan oo ay ku dhawaaqda in doorasho hor leh la qabto.
Isbaheysigiisa NASA ee Odinga ayaa ku dhawaad maalin kasta dalka ka dhigayay muddaaharaad ay uga soo horjeedaan guddiga doorashada. Booliska ayaa lagu eedeeyay inay isticmaaleen xoog xad dhaaf ah. Tobannaan qof ayaa ilaa iyo hadda ku dhimatay muddaarahaadyadaasi.
Si hufan looma qaban doono